Ụbọchị My Pet » Gị Online Social Profaili Na Na Na Na mmekọrịta gị na?
site KC Morgan
emelitere ikpeazụ: Jan. 23 2021 | 3 min agụ
Ị maara na ị bụghị nanị onye obsessively enyocha ha ụbọchị na-elekọta mmadụ media saịtị na search engines ná mgbalị igwu elu unyi, nri? Ị maara ihe gị Internet akara ukwu na-ekwu banyere gị nwere mmekọrịta?
The Enyi ruru
Dị nnọọ otú ọtụtụ red flags ị pụrụ ga-azụ na ndị enyi gị na-eso ụzọ anatara? Ma eleghị anya, ihe karịrị ị na-eche. Otu n'ime ndị kasị inweta iberibe ọmụma banyere gị, dịkarịa ala mgbe ọ na-abịakwute Internet, bụ bụ ndị enyi gị. Gaje Ịbụ ụbọchị nwere ike na-achọ gị Nsuso na-akpụ ụfọdụ mara mma ike echiche.
Ọ bụrụ na ị anya site a ndepụta nke enyi ngwa ngwa, otu mpempe ozi ga-etinye obi gị dum ozugbo: na ruru nke ndị ikom na ụmụ nwaanyị na ndepụta. Women ndị nwere nza nke enyi ya nwoke nwere ike ịbụ na-amaja ka nwere ụbọchị. Ha na-aga na-eche ndị na ndị a niile na ụmụ okorobịa na-, ihe mmekọrịta bụ, na ikekwe na-enwe egwu. Otu na-aga n'ihi na ụmụ nwaanyị ndị na-achọpụta na ndị mmadụ na-elekọta mmadụ media. Mgbe ha na-ahụ a otutu inyom na ndepụta, ha na-aga na-achọ ịmata na ndị ọzọ anya.
The Ama Ị ekpughe
Social mgbasa ozi bụ ụzọ dị mma isi na-akpọtụrụ na nwere jikọọ na mmadụ ị na-enwe, ma ọ na-ejupụta na-ekpo ọkụ-button isiokwu. Ọtụtụ ndị na-eji na-elekọta mmadụ media saịtị na-eso na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-elekọta mmadụ na-akpata na ha okwu. Ọbụna ụfọdụ na-eji ya dị ka a na Soapbox ka tout ha Pita ọdịmma. Strong echiche pụrụ ịbụ nnọọ anya-etinye na-nwere ụbọchị, onye nwere ike ghara obi dum na-ekweta na mbipụta ọ bụla.
Ọ bụghị ezigbo ịchọta a nwunye na-ekweta na unu na ọ bụla otu nke, ma ọ bụ mgbe niile ka mma na-na-emeghe uche. Mgbe ị na-akọ ọtụtụ akụkọ a na-achọ ịlụ gị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọdịmma, ị nwere ike ịbụ mbịne ha na pushing ha pụọ ​​n'ihu gị ọbụna na-enwe ohere na-ọsọ n'ala.
Na-arịọ Ị Mee
Abụọ ị na-akpa n'ihi na a izu, na ọ na-aga nke ọma. Ma tupu i rachighaa site na ha enyi ndepụta na-akọ ọtụtụ akụkọ ihe niile nke ha ndị òtù ezinụlọ na ndị enyi na-arịọ, kwụsị na-eche. Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ka enyi ụmụnne ha, nne na nna na ụlọ akwụkwọ dị elu buddies gwụla ma ị expressly ịjụ ikike ime otú ahụ.
Eme ya n'azụ onye òtù ọlụlụ gị azụ ma ọ bụ na-enweghị ha nkwekọrịta, na i nwere ike ifufe elu na-achọ ka a stalker. Ọbụna mgbe ebumnobi gị na-kpam kpam-emeghị ihe ọjọọ, ọ na-aga ma ọ bụrụ na anya-enyo anyị enyo na mberede na ị na-friending niile nke ha na ndị enyi. Onye ị chọrọ ịlụ ga na-eche na ị na-agbalị ịnọgide na-na taabụ na ha, na nke a nwere ike ịkpọlite ​​ụdị nile nke obi mbipụta.
The Photos Ị Ekekọrịta
Ị dieted niile oyi na ugbu a ị anya ịtụnanya na ika-ọhụrụ uwe eji egwu mmiri ... ma nke ahụ apụtaghị na i kwesịrị ịkọrọ ya na ụwa. The stof ị na-ekpughe na foto gị nwere ike na-enye anya na-ezighị ezi banyere ụdị onye ị na-. Gosi anya a otutu akpụkpọ, na gị nwere nwunye nwere ike ịghọ ekworo. Ha nwere ike ida nkwanye ùgwù maka na ị. Ha pụrụ ọbụna na-egosi foto gị ndị ọzọ, ma ọ bụ re-ebipụta ha ma na-eso ha na ụwa, mgbe ị bụ naanị njikere ikere òkè na eserese na a họrọ ole na ole.
Ozugbo ị na-etinye ihe na Internet, onye ọ bụla nwere ike inwe ya na onye ọ bụla ga-etolite echiche banyere ya. Cheta na tupu ị na-egosi anya na uwe eji egwu mmiri ogbugba.
Na-elekọta na otú unu chee onwe gị n'ihu na-elekọta mmadụ media saịtị. Ị na-achọghị ikpughe ukwuu. Na goofy foto nke ị na ị hụrụ n'anya ebe ị na-ebe na n'ihe ndina nwere ike ebua oké echeta gị, ma n'ihi na a nwere ụbọchị ọ pụrụ ịbụ nnukwu ihe red ọkọlọtọ. Ị nwere ike mgbe-ohere ịkọwara ya na àgwà dị otú ahụ bụ nke ọma n'oge gara aga.
Gosi àgwà gị online, ma na-egosi na ẹdụk version. Na ị chọrọ ịhụ a nwunye onye hụrụ gị n'anya n'ihi onye ị bụ, na ị ga-enwe ọtụtụ ohere iji na-ekpughe gị ọtụtụ n'ígwé. Ị na-enweghị ka ọsọ na-egosi gị niile ikpehe oyi na Internet.
Ise Online dịwara Profaịlụ mejọrọ Iji Zere
Nwere ike Pet allergies na dịwara bikọta?